China 4㎡ MOBILE LED TRAILER fekitori uye vagadziri | JCT
Jingchuan 4㎡ mobile LED trailer （Muenzaniso: E-F4） inonzi "shiri duku idiki, asi ine zvikamu zvishanu", uye inonzi "BMW mini" mujingchuan trailer series.
Jingchuan 4㎡ nhare yakatungamira yetrailer（Muenzaniso:E-F4） inonzi "shiri duku idiki, asi ine zvikamu zvese zvishanu", uye inonzi "BMW mini" mujingchuan tirera dzakateedzana. Hukuru hwehukuru hwe4㎡mobile LED yekushambadzira tirera ingori 2914mm * 1800mm * 2260mm, isingasviki mashanu mita metres. inogona kushandiswa kupaka E-F4, iyo isingakanganise mugwagwa traffic uye inochengetedza mutengo wekubhadharisa saiti kune mamwe akazara mudhorobha, mativi uye dzimwe nguva Panguva imwecheteyo, chigadzirwa chakashongedzwa nerutsigiro, kusimudzira hydraulic, kutenderera uye mamwe maratidziro, akazara mashandiro; Saizi saizi iri 2560mm * 1280mm, uye iyo yekunze yakazara-ruvara skrini inowedzerwa ne-Ultra-yakakwira tsananguro, iyo inogona kuunzira vanhu yakanakisa yekuona yemufananidzo chiitiko.
360° skrini inotenderera
4㎡mobile yakatungamirwa netrailer yekubatanidza rutsigiro, uye mashandiro e hydraulic kusimudza, kutenderera system, JingChuan kambani yakazvigadzira yakatenderera inotungamira pini inogona kuona LED yekuona renji 360 ° isina Angle yakafa, inowedzera kuwedzera kutaurirana, uye inonyanya kukodzera guta, gungano , yakazara vanhu maficha senge kunze kwemitambo nhandare.
Mufashoni kutaridzika, sainzi uye tekinoroji inofambisa kunzwa
Chinja chigadzirwa mutsetse, muviri wechinyakare unotora dhizaini isina furemu, mitsara yakachena, angular, inoratidza zvizere pfungwa nesainzi yazvino uye tekinoroji. Inonyanya kukodzera kudzora traffic, kuita, kuratidzwa kwehipster, senge yemagetsi kuvhurwa, ndicho chiitiko yemafashoni maitiro uye ekucheka-kumucheto tekinoroji kana chigadzirwa, uye mamwe midhiya kusimudzira akanakisa.
Yakapinza hydraulic system, chengetedzo uye kugadzikana
Yakapinza hydraulic system chengetedzo uye kugadzikana, inogona kufamba 1000 mm; Inogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nharaunda, LED skrini, ita shuwa kuti vateereri vanowana akanakisa ekuona Angle.
4㎡mobile yakatungamirwa tirera ine inertial mudziyo uye ruoko rwakamedura, uchishandisa mota inogona kudhonzwa kuti ifambe, uko vanhu vazhinji kune iyo nhepfenyuro nekushambadzira, kwaunofunga nezvazvo; Sarudza mechina dhizaini yemanyore rutsigiro makumbo, nyore uye nekukurumidza kushanda;
1.Saizi yakakura: 2914 * 1800 * 2260mm, iyo 400mm iri inertial mudziyo, uye traction tsvimbo: 1000mm;
2. LED yekunze yakazara yakazara skrini (P3 / P4 / P5 / P6) saizi: 2560 * 1280mm;
3. Kusimudza system: hydraulic cylinder inotengeswa kubva kuItaly nekurohwa kwe1000mm;
4. Yakashongedzerwa ne multimedia playback system, inotsigira 4G, usb flash disk uye mainstream vhidhiyo fomati;
Muenzaniso E-F4（4㎡ nharembozha LED turera）
Brand JCT Kunze Kwekunze 2914 * 1800 * 2260mm
Yakazara Trailer Misa (GTM) 730KG Tire Matayi akasimba erabha
Kutsigira makumbo 4pcs Akaputsa Bata / Hydraulic
Chinovhara SIZE 2560mm (W) * 1280mm (H) Dot Pitch P3 / P4 / P5 / P6
Hydraulic KusimudzaSystem Nokusimudza Range 1000mm
Hydraulic Inotenderera Sisitimu Screen inogona kutenderera 360degrees
Mapapiro-anopesana neNzvimbo Kurwisa Chikamu 8mhepo mushure mechidzitiro simudza 1000mm
Chiyamuro Voltage 220V Kubuditsa Voltage 48V
Ikozvino 15A Avhareji yesimba rekushandisa 0.3kwh / ㎡
Inesarudzo yekumisikidza Akatungamirira Screen & Battery simba & zvemaziso hutachiwana iri kuita
Pashure: JCT 7.6M LED STAGE TRUCK-Foton Ollin - JCT
Zvadaro: 6㎡ Nhare yakatungamirwa netrailer
Akatungamira Nhare Billboard Trailer
Akatungamirira Mobile Chinovhara Trailer
Akatungamira Mobile Trailer
Akatungamirira Screen Mobile Trailer
Mobile Yakatungamira Kushambadzira Trailer
16㎡ Mobile Yakatungamirwa Trailer
12㎡ Nhare Yakatungamirwa Trailer
22㎡ Mobile Yakatungamirwa Trailer
12㎡ Scissor Rudzi rweMahara yakatungamira Trailer
Nhare Yakatungamirwa Billboard Rori, Mobile Yakatungamira Kushambadzira Rori, Akatungamirira Mobile Rori, Akatungamira Mobile Trailer, Mobile Yakatungamira Screen Rori, Akatungamira Nhare Yekutengesa,